सिर्जनात्मक सोच अर्थात् सृष्टि रेग्मी (भिडियो रिपोर्ट)
सृष्टि रेग्मी बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाकी उपमेयर हुन् । उनका बुवा साबिक एमालेका तत्कालीन बाजुरा जिल्ला उपसचिव ताराचन्द्र रेग्मीलाई माओवादीले २०६० मा हत्या गरेका थिए । २३ वर्षमै उपमेयर निर्वाचित सृष्टि अहिले बुवाको हत्या गर्ने पार्टीसँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने ठाउँमा छिन् । उनी भन्छिन् : त्यो एउटा समयको घटना हो । राज्यले कुनै बेला न्याय पक्कै देला । अहिलेको कार्यभर भनेको समृद्धि, विकास र नागरिक सशक्तीकरण हो । https://youtu.be/QRE1K6tjxkQ पुरा पढौ
लायन विशेश्वर आचार्य सेकेण्ड भाइस डिष्ट्रिक्ट गभर्नर पदका उमेद्वार लायन्स डिष्ट्रिक्ट ३२५ बि १ नेपाल पोखरालाई आफ्नो कर्मथलो बनाएर कार्य गरिरहेका शिक्षासेवी विशेश्वर आचार्य यतिखेर लायन्स डिष्ट्रिक्ट ३२५ बि १ को द्धितिय भाइस गभर्नर बन्ने दौडमा छन् । शिक्षा संगै आचार्यले लायन्सबाट सामाजिक क्षेत्रमा गरेका कार्यहरू निकै प्रशंसनीय छ । पोखराको नोभेल एकेडेमी सहित दर्जनौं संघसंस्थामा आवद्ध आचार्यको २ वर्षपछि गभर्नर बन्ने ढोका यस वर्ष खुल्दैछ । यसका लागि अहिले… पुरा पढौ
बलियो काँग्रेस बनाउने कल्याण गुरुङका सूत्र
सरकारका एक पछि अर्का कामहरु विवादको भूमरीमा फस्दै जाँदा पनि अहिले प्रतिपक्षमा बसेर काँग्रेसले जसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने थियो । त्यो गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । आन्तरिक विवादको भूमरीमा फसेको काँग्रेसले सरकारका गतिविधिहरुमा खबरदारी गर्न नसक्दा यतिबेला सरकारले भने मनपरी मच्चाईरहेको छ । यही प्रसंगमा काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङसँग काँग्रेसको भूमिका कमजोर हुनुको कारण के हो भन्नेबारे सोधिएको थियो । प्रस्तुत छ, गुरुङसँग गरिएको कुराकानीको… पुरा पढौ
युवराज पौडेल क्यान महासंघ कास्कीका अध्यक्ष हुन् । क्यान कास्कीले यही फागुन १८ देखि २४ गतेसम्म १० औं संस्करणको भायानेट क्यान इन्फोटेक गर्दै छ । यसै क्रममा इन्फोटेक आयोजना गर्नुको उद्देश्य, आकर्षण लगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी । यसपालि क्यान इन्फोटेकमा के के हुनेछ ? हामी प्रविधि अनुसार चल्न बाध्य छौं । अब धेरै काम इन्टरनेटबाटै हुने भइसक्यो । यो प्रविधि र अनलाइनको मेला भएको हुनाले इन्टरनेट र… पुरा पढौ
गाउँबाट शिक्षा आर्जन र भविष्य खोज्य सहर झरेका युवायुवतीमा अनेक रंगिन सपना हुन्छन् । उच्च तहको अध्ययन, सहरमा घर, गाडी, सुखी परिवार, सके गाउँका बाआमा र गाउँलेलाई पनि भरथेग । यसरी सहर पस्ने धेरैका सपना विस्तारै हराउँदै जान्छन्, थोरैमात्रै सपनाको सिंढीसम्म पुग्छन् । जो पुग्छन्, तीमध्ये पनि अधिकांशले पुरानो धरातल बिर्सन्छन् । स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका, रापाकोट, सिरिन्डाँडाका युवराज पौडेल (अर्जुन) भने यसका अपवाद हुन् । गाउँबाट पोखरा झरेपछि उनले एकैपटक… पुरा पढौ
घुँडाको जोर्नी फेर्न मिल्छ, सबै समस्याको समाधान छ
ललितपुरको भैंसेपाटी, सैन्बुमा नेपाल मेडिसिटी अस्पताल नेपालमै सबै उपचार सम्भव गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना भएको हो । डा. उपेन्द्र महतोको ड्रिम प्रोजेक्ट यो अस्पताल अहिले बिरामीसम्म अस्पताल नै जानुपर्छ भन्ने उद्घोषका साथ क्रियाशील छ । भविष्यमा मेडिकल कलेजसमेत स्थापन गर्ने सोचका साथ स्थापित यो अस्पतालमा अहिले ३ सय ५० बेड छन् । २०१९ भित्र ७ सय ५० बेड सञ्चालन गर्ने अस्पतालको तयारी छ । मेडिसिटीले पूर्वदेखि पश्चिम नेपालका मुख्य सहरमा… पुरा पढौ
मनप्रसाद सुब्बा नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा परिचीत नाम हो । नेपाली साहित्यीक क्षेत्रमा स्वदेश बाहिर कलम चलाउने श्रष्टा मध्ये सुब्बा चर्चित मान्निछन् । पूख्यौली थलो पाँचथरको इम्बुङवाट भारतको दार्जिलिङस्थित बिजनबारी पुगेका साहित्यकार सुब्बाले आफनो साहित्यीक यात्रालाई उत्तिकै सक्रियता बनाउदै आएका छन् । ‘ मलाई प्रवासी हुँ जस्तो लाग्दैन’ नेपाली साहित्यमा पाँच दशक बढी देखि कलम चलाउदै आएका सुब्बाले भने,–‘ साहित्य भन्दा म कहिल्यै टाढा हुन सक्दिन् ।’ उनले साहित्यको सिमा नहुने… पुरा पढौ
नयाँ राज्यसक्ता त केही पनि छैन : चैतन्य
दर्शन, राजनीति र सौन्दर्य शास्त्रका प्रखर चिन्तक तथा विश्लेषक वैद्य किरण ‘चैतन्य’ अगम नामले पनि लेख्छन् । प्रगतिवादी समालोचना र दर्शन शास्त्रका ज्ञाता मानिने उनका आधा दर्जन कृतिहरू प्रकाशित छन् । साँढे ६ दशकको उमेरमा पनि उनी माक्र्सवादी दर्शनले सिकाएको बाटोमा युवा उर्जाका साथ यात्रारत छन् । समालोचक, सौन्दर्य चिन्तक चैतन्यसँग फडिन्द्र अकिञ्चनले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ ः यहाँ नेपालको एउटा राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा हुनुहुन्, सौन्दर्यशास्त्री र प्रगतिवादी… पुरा पढौ